トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Aura nezvahunonyatsoreva uye Kusangana kusangana mapatya Seoul
▼ (kutamira pane kombiyuta) peji iyi ndima
ndiye Aura rinonangana mapatya mweya? Kuti wezvikamu kukwezvwa ari mweya dzichibvisa
yakatarwa pfungwa nyore hupere pfava noukama
mapatya Seoul CHECK
Twin Soul akava mumwe munhu zvechokwadi [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi pamusoro kuti nzira
kare akaparadzanisa mweya, hazvo kurarama nguva dzose chete ino uye pedyo ezvinhu kwete. Kunenge kusangana kumbobvira yakakwirira mapatya mweya, asi unogona kuva kuti kuitira kuzosangana kusangana. Kana takasangana
mapatya mweya, pane iripowo zvinoreva. Zvinonzi, saka kure chimiro rwaiwanikwa mu vapenyu vane upenyu uye pfungwa, vakaonawo maronda vakatambura muupenyu hwekare, ndiko kubvisa. Zvinhu izvi zvichaita kudzivisa Fusion mweya miviri. Somugumisiro, isu munyika ino panewo havagoni kuva zvakadaro Fusion.
mapatya Seoul kuti Fusion, unofanira nemumwe kukwezva mumwe panguva mweya pamwero. Kuzviziva, kuti pfungwa serakaoma mufaro, wasunungurwa kubva avo akabatwa pachangu nokubvisa asingabatsiri pfungwa, chinhu chakakosha kuti abate nesimba mumwe ari mukuru pamwero. Vamwe Aura kusangana
mapatya mweya? Kana takasangana
mapatya Seoul, zvinonzi kuva semhanza yakadaro.
? anoda kana shamwari yepedyo, mhuri uye kurambana kuna
makore akawanda kudanana kuti anoda uye shamwari yepamwoyo, kana iwe kuramba mumhuri inokosha uye zvimwe, uchada ndaravira nokururamisira kurwadziwa muupenyu hwangu. Nenzira iyi kuparadzana, akadai kuzunungusa upenyu, kwave pedyo kunosangana njodzi mapatya mweya.
? kurasikirwa chii chaiva chido
akadai Somuenzaniso, kuramba kurasikirwa basa kuti kunge zvakaoma kunzwa hwakakodzera kurarama, uyewo mutambo wakanga muchibereko wakuvara kushanda, guru kana paine chiitiko nepfungwa kurasikirwa, unogona Twin Seoul anozviratidza pamberi ziso sezvo paine ndiani kutsigira kwaari. Ayakashino pamuganhu
? upenyu norufu Bailout
tsaona chaizvo kana chirwere apo yakafanira, kunyange kana izvozvo zvakaitika vachidzungaira kuburikidza rimwe upenyu muganhu kana rufu, ndiye mumwe Aura rinonangana mapatya mweya. Pamusoro mamiriro dzenjodzi kuti mweya zvichapfuura kubva ino, chichagamuchirwa zvakare kunzi mumwe mweya uri konzati.
mapatya mweya nazvo kuti
pfungwa wezvikamu kukwezvwa ari mweya akabvisa mugaba, zvakakodzera kubvisa vaunganidza wakaiswa pfungwa uye ino chave akatakura muupenyu hwekare. The kana kurwadziwa muupenyu uri aizotangira kusangana mapatya Seoul, kubvisa imwe pfungwa uye anokwenya akadaro, zvingaita muka kubva kuti kurarama Zvisaririra kwomweya.
mapatya Seoul uye muitiro kuti akakonzera kubatana kwe haisi chete haana kufara, anouya yomuedzo kukuru. Zvisinei, nzvimbo imwe mweya chokutanga huviri, nekuti ndiko kudzidza kukurira zvinoverengeka, inoti kuti zvinorwadza zvakakodzerawo kuitira kuti mweya zvakare anodzokera chete.